SoloCam E20, kamera inochinja-chinja yekunze kubva kuEufy [Ongororo] | Gadget Nhau
Kuchengetedzwa kwemusha kwakanyanya kukosha munguva dzino dzezhizha, uko, kungave pazororo kana kuzorora, tinowanzo shandisa nguva yakawanda tiri kure nemusha. Naizvozvo, hazvimborwadzi kutora mukana wese mikana iyo tekinoroji inotipa kuti tizvirambe takachengeteka uye pamusoro pese kudzikama.
Zvitsvagurire nesu uye uone kuti kugona kwayo chii uye kuti chii ichi kamera yeEufy yekunze inokwanisa kuita, urikupotsa here?
2 Wireless uye nenzvimbo yekuchengetedza
3 Akaitwa masystem ekuchengetedza
4 Kubatana uye kuenderana
Chigadzirwa chinotevera yakajairwa Eufy dhizaini dhizaini. Tine chigadzirwa chemakona, chakareba, uye chine mativi akakomberedzwa. Muchikamu chepamberi ndipo patichawana ese masensa uye kamera, nepo kuchikamu chekumashure kune kwakabatana kwakasiyana, senge kubhureki remadziro. Isu tinorangarira kuti yakagadzirirwa uye kuiswa panze, saka rusvingo rwegomo iri runonyanya kunakidza. Kuisirwa kwayo kuri nyore kwazvo sezvo tichigona kuinamatira neyakaviri-mativi tepi, kana isu tinogona kuimonera yakananga kumadziro.
Weight: 400 gramu
Rutsigiro rwe mobile rune nzvimbo ine magineti zvishoma inotsvedza zvakanaka uye inotibvumidza kuti tigadzirise neinonakidza renji yekufamba. Padanho rekugadzira zvakakosha kuti uzive kuti isu tiri kutaura nezve yekunze kamera, saka isu tine IP65 dziviriro kubva kune yakaipa mamiriro ekunze, nenzira imwechete iyo iyo yakasimba inovimbisa kushanda kwakakodzera zvese munzvimbo dzinopisa zvakanyanya uye munzvimbo dzinotonhora zvakanyanya, idzo isu tisati takwanisa kunyora. Muchikamu chino hatigone kushora kamera iyo, pasina kunyanyisa kuumbika, inotaridzika zvakanaka chero kupi. Unogona kuitenga pamutengo wakanakisa zvakananga paAmazon.
Wireless uye nenzvimbo yekuchengetedza
Zviripachena isu tiri kutaura nezve 100% tambo-isina kamera, ine bhatiri iro mune dzidziso, pasi peyakajairika mamiriro, rinopa mwedzi mina yekuzvimirira. Nezvikonzero zviri pachena hatina kukwanisa kuongorora kana mwedzi mina yekuzvitonga yakazadziswa zvizere, pAsi iyo femu inotiyambira kuti kuzvitonga uku kuchachinjwa zvinoenderana nekugadziriswa kwatinoita patinorekodha, pamwe nemamiriro ekunze. Isu tatoziva kuti zvese zvinopisa uye zvinotonhora mamiriro ekushisa anokanganisa mabhatiri e lithiamu.
Iyi kamera ine yekuchengetera kwenzvimbo kwe8GB, tinorangarira kuti inongorekodha zvirimo kana ma sensors atakagadza "kusvetuka", nekudaro ne8GB inofanira kunge yakaringana zvakakwana zvidiki zvidiki zvatinochengeta. Kuvandudza kuchengetedza uye kuvanzika, iyi kamera ine iyo AES256 yekuchengetedza protocol padanho rekunyorwa, uye zvakarekodhwa kuchachengetwa kwemwedzi miviri, nguva iyo kamera inotanga kuvanyora, zvisinei, tinogona kugadzirisa zvese izvi kuburikidza neiyo Eufy application. Izvi zvinoreva kuti kamera haina zvirongwa zvekunyorera kana mari yakawedzerwa pakutenga.
Akaitwa masystem ekuchengetedza
Paunenge iwe waita iyo kamera, iwe unozogona kumisa maviri ekuchengetedza nzvimbo, kuitira kuti kwete ese mafambiro eiyo kona yekuona anokupa iwe yambiro. Nenzira imwecheteyo, iyo system ine Artificial Intelligence, nenzira iyi inozivisa mushandisi chete kana "anopinda" achienda kumba, kunyangwe kuzivisa kana achihwanda kana kufamba zvipfuwo. Nyevero dzinoitika ipapo apo isu tave kukwanisa kuona, anenge masekondi matatu zvinotora nguva yakareba sei kuti kamera ione kufamba kunopinda uye kuratidza yambiro pafoni yako.
Yakazara HD 1080p yekurekodha system
Kana isu takaita kuti system ishandiswe, kamera inoburitsa "alarm" kurira inosvika 90 dB, iyo isingape kushanda kwakaringana padanho reruzha, asi zvakare ichave inotsamwisa zvinoonekwa kune anorwisa. Izvi zvinogona kuva chengetedzo plus. Nenzira imwecheteyo, iyo kamera ine chiratidzo chekuona husiku kuburikidza nema infrared maLED iyo inobvumidza kuzivikanwa kwakaringana kwezvidzidzo kumatunhu anosvika pamamita masere. Iyo yeArtificial Intelligence yeiyo Eufy kamera inovimbisa ka8 nekukurumidza kuti ione nyaya dzinopinda uye inopa 5% kudzikisira mumanyepo enhema.
Kubatana uye kuenderana
Chekutanga pane zvese, iyi kamera inoenderana zvizere neaviri evakuru chaiwo vabatsiri pamusika, isu tinotaura zvakajeka nezveAmazon Alexa uye Google Mubatsiri, iyo gadziriso iri nyore kuburikidza nechishandiso uye kubatana kuri ipapo Kana tangobatanidza kamera kune imwecheteyo WiFi netiweki yatakagadzira, kwatiri isu takasimbisa kuti neA Alexa kusangana kuri nyore uye kwakakwana. Iwo manejimendi echishandiso chaEufy chairo, anowanikwa kune iOS uye Android yakazara, Iyo inotibvumidza isu kugadziridza iyo kona, maneja zviyeuchidzo, tarisa yekumhanyisa zvemukati uye kuziva mamiriro azvino ebhatiri pakati pemamwe akawanda mabasa. Hatishayiwi zvachose.
Rimwe basa rekushandisa iko mukana wekutora mukana mutauri akabatanidzwa mukamera, ndiko kuti, tichakwanisa kuona munguva chaiyo zviri kuitika uye kutaura nenzira mbiri, ndiko kuti, kuburitsa mameseji uye kuatora kuburikidza nemakrofoni yako. Nenzira iyi, kana semuenzaniso vana vari mubindu, tinogona kuvayambira kuti inguva yekuenda kumba wakananga kubva kukamera uye pasina dambudziko, uye kunyatso kujekesa mamiriro neiyo murume wekuendesa weAmazon.
Yakatumirwa pa: 21 de julio de 2021
Iyo Eufy kamera yakanyatso kukwana, ine kuratidzwa kuramba kana uchinge uri kunze uye pasina kuwedzerwa mari. Izvo zvinopihwa neEufy, kupfuura kukosha kwayo kwemari, ndiko kugadzikana kwezvigadzirwa uye basa rinozivikanwa revatengi.eufy Security SoloCam ...kunyangwe kazhinji ichiwanzove nemutero kunyange kana gumi muzana pazviitiko zvisingawanzoitika, saka tinokurudzira kuti urambe wakatarira mhedzisiro pane yakajairika webhu. Iwe unogona zvakare kutarisa chishandiso pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Zvinhu zvinobudirira chaizvo uye dhizaini
Iyo yekumisikidza maitiro dzimwe nguva inokundikana
WiFi renji haina kuwanda
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » SoloCam E20, kamera yekunze ine hunyanzvi kubva kuEufy [Ongorora]